पालिका प्रमुखहरुको पहिलो निर्णयः विपन्न र स्वास्थ्य केन्द्रीत – Click Khabar
बुधबार, जेठ ११, २०७९ | १५:२६:१९ |
चितवनः जिल्लाका सात पालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखहरुले आफ्नो पहिलो निर्णय विपन्न वर्ग र स्वास्थ्यलाई प्रमुख बनाएका छन् । पदभार ग्रहणसँगै गरेको पहिलो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको हो ।
जिल्लाको एकमात्रै गाउँपालिका ईच्छाकामनाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा पालिकाभित्रका विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गर्नुभयो । उहाँको निर्णयमा विपन्न वर्गको पहिचान गरी स्वास्थ्य बीमा गर्ने उल्लेख छ ।
राप्ती नगरपालिकाले विपन्नलाई गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ । नगर प्रमुख शम्शेर लामाले खाना नहुनेलाई खानाको व्यवस्था, घर नहुनेलाई घरको व्यवस्था, कपडा नहुनेलाई कपडाको व्यवस्था, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र उपचार गर्न नसक्नेका लागि उपचारको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
खैरहनी नगरपालिकाले पहिलो निर्णय छोरी बुहारी पढाउँ, अघि बढाउँ अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । थारु समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको यस नगरपालिकाका प्रमुख शशि खनियाले नगर भित्रका सामुदायीक विद्यालय, सार्वजनिक कलेज तथा क्यामपसमा अध्यनरत थारु, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक तथा बिपन्न छात्राहरुको शिक्षामा पहँुच गर्न स्नातक तह समुहको अध्ययनमा सहयोग पुग्ने गरि कोषको स्थापना गर्ने नियर्ण गरेको बताउनुभयो ।
छात्रवृति कार्यक्रममा परेका छात्राहरु बाहेक उक्त समुहका अन्य छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा सम्मको अध्ययन पुरा गर्न लाग्ने रकम कोष मार्फत विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
माडी नगरपालिकाले बघौंडा अस्पतालको बहिरंग सेवामा सबै महिलाहरुलाई टिकट निःशुल्क गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ । नगर प्रमुख तारकुमारी काजी महतोले नगरभित्रका सम्पूर्ण महिला दिदी बहिनीहरु उपचार गर्न जाँदा टिकट निःशुल्क गरेको बताउनुभयो ।
कालिका नगरपालिकाले विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले पालिकाभित्रका विपन्नको नगरपालिकाले बीमा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
नगरभित्रका विपन्नहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको बीमा नगरपालिकाले गरिदिने नगर प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । यसैगरी पालिकाभित्रका साना किसानको दूधमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि उहाँले गर्नुभएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध सहकारी मार्फत् बिक्री गर्दा प्रति लिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिने उहाँले बताउनुभयो ।
नगरपालिकामा छुट्टै हेल्प डेस्क स्थापना गरेरे सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने रेग्मीले बताउनुभयो ।
रत्ननगर नगरपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर प्रमुख प्रल्हाद सापकोटाले दूधमा प्रति लिटर रु.१, घाँस खेतीमा प्रतिकठ्ठा रु. २ हजार अनुदान दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काम हुन नसकेर बजेट अलेया जाने कुराको अन्त्य गरी काम गर्न सकिने योजना मात्रै अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको पदभार ग्रहण गर्दै प्रमुख रेनु दाहालले महानगरभित्रका स्थायी वासिन्दाहरुबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरुको रु. १ लाखको जीवन बीमा र मासिक ७ हजार लिटरसम्म पानी उपयोग गर्नेलाई निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पहिलो कार्यकालमा भरतपुर अस्पतालमा महिला र जेष्ठ नागरिकलाई बहिरंग टिकट सेवा निःशुल्क गर्दा प्रभावकारी देखिएपछि दोस्रो कार्यकालको पहिलो निर्णय छोरी केन्द्रीत गरिएको हो ।
यस निर्णयसँगै एक वर्षमा महानगरभित्रका १ हजार ७५० छोरीहरु लाभान्वित हुने अनुमान महानगरको छ । महानगरभित्रका ५२ प्रतिशत जनताले निःशुल्क खानेपानी पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।